Ihe omimi: Ihe ntinye akwukwo nke Web Data - Emela ya!
Mgbe ị na-enweghị ike inweta data achọrọ na weebụ, n'ebe ahụ bụ ụzọ ndị ọzọ mmadụ nwere ike isi mee iji nweta nsogbu ahụ dị mkpa. Dịka ọmụmaatụ, mmadụ nwere ike ịnweta data site na API weebụ, wepụ data sitere na PDFs dị iche iche ma ọ bụ site na ebe nrụọrụ weebụ na-ekpochapụ ihuenyo. Iwepụ data site na PDFs bụ ọrụ siri ike dị ka PDF anaghị enwekarị ozi zuru ezu nke onye nwere ike ịchọ. N'aka nke ọzọ, n'oge usoro nchọta ihuenyo, ọdịnaya a na-ewepụta bụ nke koodu ma ọ bụ site n'iji ihe eji eme ihe na-emepụta. Ịchọta data weebụ nwere ike ịbụ ọrụ siri ike, ma ozugbo otu onye nwere echiche nke ihe ọ dị mkpa ka eme, ọ ga-adị mfe - we will provide the best service.
Data readable data
Otu n'ime ihe mgbaru ọsọ weebụ kachasị mma bụ inwe ike ịnweta data ị nwere ike ịgụta maka igwe. Ejiri kọmputa nye nhazi data a, na ufodu ihe omuma atu ya bu XML, CSV, Excel files, na Json. Nchịkọta ngwaọrụ nwere ike ịmepụta bụ otu n'ime ụzọ dịgasị iche iche nke mmadụ nwere ike isi mee iji nweta ihe ntanetị weebụ dịka ọ bụ usoro dị mfe na ọ dịghị achọ ọkwa dị elu iji mee ya.
Web scraping bụ otu n'ime ụzọ eji eme ihe maka inweta ozi achọrọ. E nwere ụfọdụ mgbe ebe nrụọrụ weebụ anaghị arụ ọrụ nke ọma.
Ọ bụ ezie na a na-ahọrọ ihe ntanetị weebụ karịsịa, e nwere ihe dị iche iche na-eme ka ọ dịkwuo mgbagwoju anya. Ụfọdụ n'ime ha na-agụnye koodu HTML nke a na-agwakọta nke ọma na nnukwu nnweta ohere. Mgbochi iwu nwere ike bụrụ ihe esemokwu n'iji data weebụ na-eme ihe ntanetị n'ihi na e nwere ụfọdụ ndị na-eleghara iji ikikere anya. Na mba ụfọdụ, a na-ewere nke a ka ọ bụ sabotaging. Ngwaọrụ nwere ike inye aka n'iwepu ma ọ bụ wepụ ihe ọmụma gụnyere ọrụ weebụ na ụfọdụ nkwụnye ihe nchọgharị na-adabere na ihe nchọgharị ahụ na-eji. Enwere ike ịchọta data weebụ na Python ma ọ bụ ọbụna PHP. Ọ bụ ezie na usoro a chọrọ ọtụtụ nkà, ọ nwere ike ịdị mfe ma ọ bụrụ na ebe nrụọrụ weebụ nke otu na-eji bụ nke ziri ezi.